जाडोमा मौसममा यौन सम्पर्क गर्न नजान्दा जान सक्छ ज्यान ! [यसरी पुर्याउनुहोस् ध्यान] « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
जाडोमा मौसममा यौन सम्पर्क गर्न नजान्दा जान सक्छ ज्यान ! [यसरी पुर्याउनुहोस् ध्यान]
२१ पुष २०७५, शनिबार २१:३० मा प्रकाशित
काठमाडौं । यौनसम्पर्क उमेरसँगैं हुने एक प्रक्रिया हो । क्षणिक सन्तुष्टिका लागि मात्रैं नभई मावन जीवनचक्रको लागि यौन आवश्यक पनि छ ।
अहिले नेपालमा जाडो लगातार बढ्दैं गएको छ । यो बिचमा दम्पतीहरुलाई वा प्रेम जोडीहरुलाई यौनचाहाना हुनु कुनैं नौंलो कुरा होईन तर यौनसम्पर्क गर्दा ध्यान दिइएन भने ठुलो खत्तरा पनि हुन सक्दछ । धेरै मानिसहरूले जाडोमा शरीरमा तेल दल्ने गर्दछन् र कतिपयले त यौनसम्पर्क गर्नुपूर्व गुप्ताङ्गमा समेत तेल लगाउन मन पराउँछन् । विशेष गरेर पुरुषहरूले यौनसम्पर्क राख्नु पूर्व लिङ्गमा तेल लगाउने गरेको पाइन्छ ।
धेरैका अनुसार लिङ्गमा यसरी तेल लगाउनाले त्यसमा बढी कडापन आउँछ साथै यसले योनी भित्रको चिल्लोपना समेत बढाउँछ । यस कामको लागि नरिवलको तेललाई आदर्श मान्ने गरिएको छ । त्यसै कारण कतिपयले नरिवलको तेलको उपयोग यस्तो कामका लागि गर्ने गरेको पाइएको छ ।
तर अरू मौसममा जस्तो जाडो मौंसममा भने लिङ्गमा नरिवलको तेल लगाएर सम्भोग गर्नु उचित मानिंदैन । किन भने यसका केही जोखिम रहेका छन् ।
एक शोधका अनुसार नारियलको तेलमा कोमेडोजेनिक गुण हुने गर्छन् अर्थात यो थोरै मात्र चिसोमा जम्न सक्छ । यस्तोमा यदि यौनक्रियाकोदौरान यसको प्रयोग गर्ने हो भने यो योनी भित्रै जम्न सक्छ जसले संक्रमणको जोखिम बढ्छ । नरिवलको तेलमा एंटीमाइक्रोबियल गुण हुन् गर्दछ अर्थात यसले ब्याक्टेरियाहरूलाई मर्ने गर्दछ ।
तर योनीभित्रको वातावरणलाई स्वस्थ बनाइराख्न थुप्रै ब्याक्टेरियाहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुने गर्दछ । यस्तोमा नारियलको तेलले राम्रा ब्याक्टेरिया पनि मारिदिने हुँदा यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
जाडो मौसममा नरिवल तेलको पत्र योनीभित्र जमेको खण्डमा त्यसलाई बारम्बार धुँदा पनि नजाने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यो अझै खतरनाक हुन सक्छ । एजेन्सी